ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း « YRIC
ပေါ်လစီ & ဥပဒေ
YRIC အတည်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတရာ စက်မှုဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Poushing Co., Ltd သို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တည် ဆောက်ရေး ကာလ တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ ကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Category: သတင်း ဇူလိုင် 18, 2020
PreviousPrevious post:ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းNextNext post:List of Summaries for Endorsed Enterprises of Yangon by Yangon Region Investment Committee Meeting No. 12-2020 at 24.7.2020
OSS Online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ရေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
ဩဂုတ် 7, 2020
ဇူလိုင် 30, 2020
Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) သက်ရောက်မှုကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၂/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခြင်း
ဇူလိုင် 24, 2020
ဇူလိုင် 17, 2020
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ
ဇူလိုင် 11, 2020
Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) သက်ရောက်မှုကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၁/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခြင်း ﻿
ဇူလိုင် 8, 2020
List of Summaries for Endorsed Enterprises of Yangon by Yangon Region Investment Committee Meeting No. 12-2020 at 24.7.2020
ဇူလိုင် 18, 2020
ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှုန်းထားများ လျှော့ချကောက်ခံခြင်း ကြေညာချက်
ဧပြီ 30, 2020
ဧပြီ 30, 2019
အများနှင့်အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးအကျိုး ရည်မျှော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဧပြီ 5, 2019
ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာချက်
ဧပြီ 2, 2019
ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သောကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ကြေညာချက်
မတ် 11, 2019
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (YRIC) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုချက်အေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။
မြေကွက်အမှတ် ၄၉ မြေတိုင်းအမှတ် ၈၅ ကံဘဲ့(၇)ရပ်ကွက်၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ထိ နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၃၀ ထိ